Ny tontolon' IkalaFanja: Niova hono aho, niova tsy toy ny taloha
Izay Tia Maquillage 23 juin 2015 à 20:15
Kay, tena niova amin'ny tsara ianao izany ramatoa. Tsara loatra ity programa fanatanjahantena isan'andro. Dia mahavità be e Sady mahafinaritra no mahasalàma io ka dia tohizo hatrany. Ny sakafo koa ity tena ara-pahasalamana be mihintsy. Misaotra nizara mba ho arahinay :) "Soa fianatsa ro mahavokatsa"
aina vicky 24 juin 2015 à 04:53
Misaotra aky, za ky efa hitako tena miha antitra, antitry ny adim-piainana dia mba miezaka mafy mitaizataiza vatana eto aloha fa tsy te hiletra fanafody raha sanatria marary eo. Izay mahakolokolo hono manana ny soa dia mba te ho soa moa zany fa asa izay ho vokany. Dia andao hanaraka ahy! Izaho io miala tsimoramora @ tongolo fa tsy mahasoa ndray hono ny tongolo sy ronono e! Hahaha mahita zavatra ity fivoarana eto ambonin'ny tany ity. Misaotra aky miresaka eto foana a! Ba be dia be
Michelle Rabe 24 juin 2015 à 05:00
Feno dia feno akia izany fandaharam-potoanan'ny fanatanjahan-tenan-dry izany, mendrika halaina tahaka. Fa na ny sakafo koa aza dia feno dia feno tokoa. Misaotra betsaka nizara! Mirary soa be dia be!! fa raha ireo aloha dia tena soa tokoa no azo avy aminy.
Mbara Ramavozanany Ralaimanampisoa 16 juillet 2015 à 04:04
Coucou Fanja, tonga dia te hanontany aho hoe fa maninona akia no asina levure de bière ny melon ?! :D
aina vicky 20 juillet 2015 à 22:39
Ny levure de bière aky feno vitamines sy minéraux ilain'ny vatantsika olombelona a. Dia au lieu dia manisy sira sy poivre ny ahy io no itako mampatsiro ny sakafoko 😉 ilaintsika vehivavy indrindra koa be fer ao, sady mampaniry volo, ny volo rehetra maniry be daholo 😜